के तपाईले सर्पबाट बनेको वाइन पिउनुभएको छ ? « News24 : Premium News Channel
के तपाईले सर्पबाट बनेको वाइन पिउनुभएको छ ?
काठमाडौं । संसारमा थरी–थरीका वाइन पाइन्छ । वाइन ठीक्क मात्रामा सेवन गरेमा औषधिको रूपमा समेत लिइन्छ । बजारमा विभिन्न स्वाद र किसिमका वाइन पाईन्छ र सोही अनुसारका पारखी पनि छन् । तर, के तपाईले सर्पबाट बनेको वाइन सेवन गर्नुभएको छ ? हो, सर्पको वाईन पत्याउनु भएन ?
हुनतः सर्प भन्ने बित्तिकै कैयौं मानिसको जिउ सिरिङ हुन्छन् । तर, केही देशमा भने सर्पको मासु र रगतको वाइन बनाएर सेवन गरिन्छ । भियतनाममा विषालु ‘सर्पको वाइन’ बनाइन्छ र बिक्री वितरण समेत हुन्छ । जसको नाम नै ‘स्नेक वाइन’ राखिएको छ । खासमा
औषधिय गुण भएको यो वाइनको सेवनले आँखाको ज्योति राम्रो हुनुका साथै कपाल झ्mर्न रोक्ने विश्वास गरिन्छ ।
त्यस्तै मात्रा मिलाएिर औषधिको रुपमा प्रयोग गरेमा शरीरमा शक्ति प्रदान गर्न मद्धत पु¥याउँने मान्यता छ । यो वाइन बनाउनका लागि सुरुमा सर्पलाई लामो समयसम्म चामलको वाइन वा अल्कोहलमा डुबाएर राखिन्छ । अल्कोहलमा डुबाएर राख्दा सर्पमा भएको विष हराउने भियतनामीहरु बताउँछन् । त्यति मात्र नभई सर्पको पेट चिरेरे रगत सिधैँ अल्कोहलमा मिसाइन्छ । हुन त, सर्पको वाइन बनाउने चलन पहिलो पटक चीनबाट सुरुवात गरिएको हो ।
चीनको वेस्टर्न झोउ प्राविन्स ७ सय ७७ बिसी मा पहिलो पटक बनाइएको थियो । यसलाई परम्परागत चाइनिज मेडिसिनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । त्यसैले त भियतनाम पुग्ने पर्यटक स्नेक वाइनको स्वाद चाख्न र सेवन गर्न लालायित हुने गर्दछन् । के तपाईलाई पनि सेवन गर्न मन लाग्यो ?